Lumbini Online | » नक्कली डाक्टरको विगविगी,धमाधम समातीदै नक्कली डाक्टरको विगविगी,धमाधम समातीदै – Lumbini Online
नक्कली डाक्टरको विगविगी,धमाधम समातीदै
Lumbini Online March 29, 2016
काठमाडौं,सुनसरीको इटहरीमा अवस्थित पशुपति मोडेल अस्पतालका सञ्चालक पशुपति चौधरीलाई केही समय अघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले विरामी जाँच्न लाग्दा लाग्दै पक्राउ गर्‍यो।३७ वर्षका चौधरीलाई अस्पतालमा वरिष्ठ डाक्टरका रूपमा विरामीहरुले हेर्थे। जनरल फिजिसियन चौधरीको इटहरीमा राम्रो इज्जत पनि थियो।अहिले उनलाई त्यहाँ कसैले सोध्दैनन्। प्रहरीले पक्राउ गरेपछि बल्ल स्थानीयले थाहा पाए उनी त नक्कली डाक्टर रहेछन्।प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा चौधरीले भारतको पटनाबाट डाक्टरको नक्कली सर्टिफिकेट किनेको खुल्न आएको छ।
सिरहा विष्णुपुरकी ३३ वर्षीया विनिता यादव कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरमा पढाउँदै गर्दा सिआइबीले पक्राउ गर्‍यो।
उनले पनि डाक्टरको नक्कली सर्टिफिकेट किनेकी रहिछन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चिकित्सकको प्रमाणपत्र लिने परीक्षामा पास भएकी उनको एमबीबीएस पास कै सर्टिफिकेट नक्कली भएको सिआइबीले जनाएको छ।
चितवनमा डाक्टर हुँ भन्दै राम्रो स्थान बनाएकी यादवको असली हर्कत सार्वजनिक भएपछि उनी विक्षिप्त भएकी थिइन्। पक्राउ गरेरै अनुसन्धान गर्दै गर्दा उनको मानसिक अवस्थै विग्रिएपछि महाराजंगस्थित शिक्षण अस्पताल पठाइएको थियो। केहीदिनको उपचारपछि उनको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ।
सिआइबीले केही महिना यता नक्कली डाक्टरहरु माथि ‘क्वाक’ अप्रेसन चलाइरहेको छ। १७ जना नक्कली डाक्टर पक्राउ परिसकेका छन्।
निजी अस्पताल क्लिनीक मात्रै होइन कति त सरकारी अस्पतालमा कार्यरतसमेत नक्कली भेटिएका छन्।
प्रारम्भिक चरणमा नक्कलीले आफूसँग नभएको ज्ञान छ भन्ने र नक्कली काम गर्ने विरुद्ध क्वाक अप्रेसन चलाइएको सिआइबीका डिआइजी नवराज सिलवालले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘नागरिकको जनस्वास्थ्यमा ठूलो खेलवाड र लापरबाही देखिएपछि क्वाक अप्रेसन सुरू गरिएको हो,’ डिआइजी सिलवालले भने।
नक्कली डाक्टरहरूको विगविगी बढिरहेको उजुरी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएपछि मेडिकल काउन्सिलले सिआइबीलाई अनुसन्धानका लागि अनुरोध गरेको थियो।
कसरी गरेको छ अनुसन्धान?
पहिलो चरणमा उजुरी परेका डाक्टरहरुको प्रमाणपत्र सिआइबीले हेरिरहेको छ। काउन्सिलको मेडिकल जाँच समेत पाइसकेका व्यक्तिहरुको प्रमाणपत्र जाँच गरेपछि त्यो नक्कली भएको शंका लागेमा थप अनुसन्धान गर्छ।
काउन्सिलको परीक्षाका लागि बुझाएका प्रमाणपत्र अध्ययन गर्दै उसले पढेको एसएलसीपछिको स्कुल कलेज थाहा हुन्छ।
चौधरीको प्रमाणपत्रमा धेरै अशुद्ध अक्षरहरु थिए। ‘उसले पटना मेडिकल कलेजबाट लिएको प्रमाणपत्रमा सन (छोरा) को स्पेलिङ नै गलत थियो। प्रमाणपत्रमा अरु पनि यस्ता अशुद्धिहरु थिए,’ अनुसन्धानमै खटिएका एक अधिकारीले भने।
प्रमाणपत्र नै अशुद्ध भेटेपछि उनीबारे थप अनुसन्धान भयो। उनी त एसएलसीमा थर्ड डिभिजन ल्याएर पास गरेका रहेछन्। एसएलसीपछि सिएमए पढे, त्यसपछि ल्याव असिष्टेन्ट।
विरामी जाँचेको भएर डाक्टरसाब भन्नथालेका थिए मानिसहरुले तर उनमा भने डाक्टरै बन्ने भूत सवार भयो। त्यसपछि उनले पटनाबाट ८ लाख रूपैयाँमा सर्टिफिकेट किने। इटहरीमा आफ्नै नामबाट पशुपति मोडेल अस्पताल खोले।
पशुपतिले जस्तै धेरैजसोले भारत वा अन्य मुलुकबाट एमबीबीएस पास गरेको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर काउन्सिलको परीक्षा दिएका छन्। काउन्सिलबाट पास भइसकेपछि तल्लो तहका सर्टिफिकेट सच्चाउनेहरू पनि भेटिएका छन्।
सिआइबीले कुनै डाक्टरको प्रमाणपत्र सम्बन्धित कलेजबाट पुष्टि गराउँछ नक्कली हो होइन भन्ने कुरा त्यसरीपनि खुल्छ।
अर्काको नाममा काउन्सिलमा परीक्षा दिन आएकालाई पनि सिआइबीले पक्राउ गरेको छ। काउन्सिलको परीक्षाहलमा नक्कली विद्यार्थी भेटिनुले नक्कली डाक्टरले कसरी काउन्सिलको प्रमाणपत्र लिन्छन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने सिलवालले बताए।
सिआइबीले अहिलेसम्म प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएकालाई मात्रै कारबाही गरिरहेको छ। तर कसरी नक्कली प्रमाणपत्र पाइरहेका छन् मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गर्न कसले सहयोग गरिरहेको छ, नक्कली विद्यार्थी बनेर परीक्षाहलमा आउनेलाई कसले सहयोग गरिरहेको छ भनेर विस्तृत अध्ययन भने गरेको छैन। अर्कोचरणमा सिआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गर्ने बताएको छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै परीक्षामा नक्कली विद्यार्थी भेटिएपछिको प्रारम्भीक अनुसन्धानमा बिचौलियासँग उनीहरुको मिलेमतो देखिएको सिआइबीकै अधिकारीहरुले बताएका छन्।
‘काउन्सिल र केन्द्राध्यक्षसँग मिलेमतो नभइ अरुको परीक्षा दिन असम्भव छ,’ स्रोतले भन्यो,‘यस्ता काम कसले गरिरहेको छ भनेर हामीले निगरानी गरिरहेका छौँ।’
डिआइजी सिलवालले भने अनुसन्धानका क्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलकै पदाधिकारी र कर्मचारीको संलग्नता देखिए अनसुन्धानको घेरामा तान्न सकिने बताए।
सिआइबीले अनुसन्धान थालेपछि कतिपय नक्कली डाक्टरहरू भागेका छन्।
‘नाम चलेको र तपाईँहरूले नै उपचार गराइरहेको कुनै डाक्टर कहिलै पक्राउ परेमा अचम्म नपर्नुहोला,’ सिलवालले भने, ‘नक्कली डाक्टरहरुको विगविगी डरलाग्दो गरि फैलिसकेको रहेछ।’
नेपालमा अर्को देशबाट ल्याउने सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिएको भएर पनि नक्कली डाक्टर बन्न सजिलो भएको उनले बताए। ‘अमेरिकाले बाह्य मुलुकबाट एमबिबिएस गरेर जानेहरुलाई डाक्टर मान्दैन। त्यहाँ पुगेपछि डाक्टरका लागि छुट्टै कोर्स गर्नुपर्छ। त्यहाँको मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा पास हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अमेरीकाले आफ्ना जनताको स्वास्थ्यलाई धेरै महत्व दिने भएर त्यहाँको नियम कडा छ, तर नेपालमा भने अन्य देशबाट ल्याउने सर्टिफिकेटलाई तुरून्तै मान्यता दिइन्छ जसले गर्दा अयोग्यहरु पनि डाक्टर बनेर घुमिरहेका छन्।’
के हुन्छ कारबाही?
विदेशबाट नक्कली डाक्टरीको सर्टिफिकेट ल्याउनेलाई मेडिकल काउन्सिलको ऐन अनुसार कारबाही हुन्छ।
त्यही मानिस सरकारी अस्पतालमा बसेर काम गरेको छ भने उसलाई भ्रष्टाचारको पनि मुद्दा लाग्ने सिआइबीले जनाएको छ। त्यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरेर सिआइबीले नै पठाउँछ।
त्यस्तै सरकारी छाप दुरूपयोग गरेर अन्य कागजात बनाएको छ भने उसलाई किर्ते मुद्दा पनि लाग्न सक्छ।
‘नक्कली डाक्टरहरुलाई हिरासतमा राखेर थुन्नुपर्छ भन्ने होइन,’ डिआइजी सिलवालले भने, ‘चिकित्सक हुँ भनेर उनीहरुले भन्ने गरिमा नै भत्किएको छ, यो ५० वर्ष भन्दा पनि बढी जेल सजायँ पाए सरह हो। अब उनीहरुले अरू पेशा अंगाल्न सक्तैनन्।’
काउन्सिलका अनुसार अहिले नेपालमा १७ हजार डाक्टर छन्। ती मध्ये १ हजारभन्दा बढी नक्कली भएको भन्दै सिआइबीले अनुसन्धान सुरु गरिरहेको छ। प्रकाश/शोभा सेतोपाटी